System Monitoring Center, iray mitantana asa sy manara-maso ny loharanon-karena | Ubunlog
System Monitoring Center, mpitantana asa an-tsary sy mpanara-maso loharano
Damien A. | 06/12/2021 14:14 | Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny System Monitoring Center isika. Ity dia fampiharana loharano misokatra rehetra ho an'ny fanaraha-maso ny antontan'isa momba ny loharanon-karena ilaina, manafoana ny filàna mampiasa fitaovana samihafa. Ity fampiharana maimaim-poana ity dia azo jerena ho an'ny Gnu / Linux, MacOS ary Windows. Navoaka tamin'ny alàlan'ny GNU General Public License v3.0 ary nosoratana tamin'ny Python.
Miaraka amin'ity fitaovana ity, ny mpampiasa Ho afaka hahita ny antsipirian'ny fanatanterahana ny rafitra sy ny antsipirian'ny fampiasana ny; CPU, RAM, kapila, tambajotra, GPU, fitaovana sensor, fampiharana, fanombohana ary maro hafas. System Monitoring Center dia fampiharana tsara tarehy miorina amin'ny GTK3 sy Python 3, izay hanome antsika angon-drakitra betsaka momba ny fampiasana ireo loharano tiantsika hofehezina.
Voalohany indrindra, tsy maintsy lazaina izany mbola beta ity fampiharana ity rehefa manoratra ireo andalana ireo aho. Noho izany, raha manapa-kevitra ny hampiasa ity programa ity ianao dia azo atao ny mahita lesoka. Tsy maintsy milaza aho fa na dia nanandrana azy aza aho dia niasa tsara, na dia tsy nasehony aza ny angon-drakitra momba ny mpankafy izay napetrako tao amin'ny solosaina izay nanandramako azy.
1 Toetra ankapoben'ny System Monitoring Center
2 Apetraho ny System Monitoring Center amin'ny Ubuntu
Toetra ankapoben'ny System Monitoring Center
Fanohanana an'i Fiteny; Anglisy sy Tiorka. Na dia milaza aza ny mpamorona fa hanampy bebe kokoa izy ireo raha manome fandikan-teny ny mpandray anjara.
Ity programa ity dia hamela antsika jereo ny antontan'isa misaraka ho an'ny; CPU, RAM, kapila, tambajotra, GPU ary sensor.
Haneho antsika ny Toetran'ny CPU, anisan'izany ny matetika.
Ity programa ity dia hanolotra antsika ny mety hisian'ny asehoy ny fampiasana antonony na fampiasana isaky ny fototra.
Afaka manao izany isika safidio teboka mazava tsara ho an'ny matetika CPU sy antontan'isa hafa.
Hanana ny mety ho hanova ny loko ny sary.
Hanana ny mety hitranga isika sivana ny fizotran'ny rafitra ataon'ny mpampiasa ary mitantana azy ireo mora foana.
Hapetraka eo am-pelatanantsika koa izany a Widget famintinana mitsingevana, mba hahazoana vaovao haingana.
Ny programa dia afaka asehoy ny fampahalalana momba ny fampiasana kapila sy ny kapila mifandray.
Izy io koa dia hanome antsika ny mety mifehy ny programa sy serivisy fanombohana.
Izy io koa dia manana ny fahafaha-manao mifehy ny elanelana fanavaozana ny sata.
Ny fandaharana dia mampiasa ambany ny loharanon'ny rafitra ho an'ny fangatahana.
Mifanaraka amin'ny lohahevitry ny rafitra.
Ny interface dia manome fanampiana fampahalalana rehefa manodina ny totozy eo ambonin'ny zavatra GUI sasany.
Santionany amin'ireo sokajy ao amin'ny fandaharana ireo. Afaka izy ireo manatona azy rehetra amin'ny antsipiriany avy ao amin'ny repository tetikasa.
Apetraho ny System Monitoring Center amin'ny Ubuntu
System Monitoring Center dia azo alaina ho rakitra fonosana deb teratany ho an'ny Ubuntu. Ity fonosana ity dia azo alaina avy amin'ny pejy famoahana tetikasa na avy any SourceForge. Raha hisintona ny kinova farany navoaka androany, dia afaka mampiasa ny navigateur web isika, na manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary mampiasa azy io. wget toy izao manaraka izao:
Raha vantany vao alaina ilay fonosana, raha mandeha any amin'ny lahatahiry misy azy isika dia afaka miroso amin'ny fametrahana manoratra ao anaty lahatahiry iray ihany:
Rehefa vita aho dia afaka izahay atombohy ny fampiharana mitady ny mpandefa amin'ny solosainay na amin'ny fanoratana amin'ny terminal iray ihany:
Para esory amin'ny ekipanay ity programa ity, tsy maintsy manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T) ary soraty ao:
Ity fampiharana ity manome fampahalalana momba ny CPU / RAM / Disk / Network / GPU, sensor, processus, mpampiasa, fitehirizana, programa fanombohana, serivisy, tontolo iainana ary ny fiovan'ny rafitra. System Monitoring Center dia fampiharana loharano misokatra izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ireo loharanon-drafitra ireo, ahafahana mitantana ireo dingana. Tsy isalasalana fa fampiharana azo ankasitrahana tokoa izy io, satria manome fampahalalana amin'ny antsipiriany tsy mila miditra programa terminal, izay mety ho olana ho an'ny mpampiasa sasany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » System Monitoring Center, mpitantana asa an-tsary sy mpanara-maso loharano
Tonga ny Firefox 95 miaraka amin'ny fanatsarana ny Picture-in-Picture ary misy dikan-teny ho an'ny Microsoft Store, ankoatry ny zava-baovao hafa.
Linux 5.16-rc4 dia manohy ny fironana midina amin'ny habeny